Okpukpe na England | Njem zuru oke
Isabel | 16/04/2021 11:01 | Emelitere ka 16/04/2021 12:02 | England
Kemgbe narị afọ nke iri na isii, okpukpe a kacha eme amara na England nke nwere ọkwá na mba ahụ bụ Anglịkan, ngalaba nke Iso Christianityzọ Kraịst.. Agbanyeghị, mgbanwe nke akụkọ ihe mere eme na ihe ịtụnanya dịka ọpụpụ emeela ka okpukperechi dị iche iche bikọta ọnụ. Na ederede na-esote anyị na-enyocha nke bụ okpukperechi ndị kachasị eme ihe na England na ụfọdụ ịmata ha.
1.1 Ozizi Anglịkan
4 Okpukpe Hindu
4.1 Okpukpe Hindu
5.1 Okpukpe Buddha
6 Okpukpe ndị Juu
6.1 Ozizi ndị Juu
Okpukpe gọọmentị nke England bụ Anglịkan, nke 21% nke ndị bi na ya. Chọọchị England na Chọọchị Katọlik dịgidere na narị afọ nke XNUMX. Nke a na-ebilite site na iwu nke Eze Henry nke Asatọ mgbe emechara ikike na 1534 ebe ọ na-akpọsa onwe ya onye isi nke Chọọchị n'ime alaeze ya na ebe ọ na-enye ndị ọ na-achị iwu ka ha pụọ ​​na nrube isi okpukpe nye Pope nke Clement VII, onye megidere eziokwu ahụ eze gbara alụkwaghịm Queen Catherine nke Aragon ka ọ lụọ onye ọ hụrụ n'anya Ana Bolena.
Iwu Treason na otu afọ ahụ mere ka a mata na ndị jụrụ omume a ma napụ eze ugwu ya dị ka onye isi nke Churchka Englandka nke England ma ọ bụ kwuo na ọ bụ onye jụrụ okwukwe ma ọ bụ nkewa ga-ebo ya ebubo oke mgba okpuru na ntaramahụhụ ọnwụ. . Na 1554 Nwanyị nwanyị Mary nke Mbụ nke England, onye nwere oke okpukperechi Katọlik, kagburu omume a mana nwanne ya nwanyị Elizabeth nke Mbụ nabatara ya mgbe ọ nwụrụ.
Otú a ka oge nke ekweghị okpukpe dịrị megide ndị Katọlik bidoro site n'ịkpọ iyi iyi Iwu nke Ọchịchị masịrị ndị niile ga-ejide ọnọdụ ọha na eze ma ọ bụ nke ụka na alaeze ahụ. N’ime afọ iri abụọ gara aga nke ọchịchị Elizabeth nke Mbụ, dịka a napụrụ ndị Katọlik ikike na akụnụba ha, enwere ọtụtụ ọnwụ nke ndị Katọlik nke nwunye eze nyere iwu nke mere ha ọtụtụ ndị nwụrụ maka okwukwe theka Katọlik dịka Jesuit Edmundo Campion. Poopu Paul nke Isii họpụtara ya na 1970 dị ka otu n'ime iri ndị nwụrụ n'ihi okwukwe nke England na Wales.
Eze Henry nke Asatọ bụ onye na-emegide Protestant na okpukpe Katọlik n'ụzọ okpukpe. N'ezie, a kpọsara ya "Onye na-agbachitere Okwukwe ahụ" maka ọjụjụ Lutheranism. Otú ọ dị, iji hụ na ọ kwụsịrị ịlụ ya, o kpebiri ịhapụ Chọọchị Katọlik ma ghọọ onyeisi nke Chọọchị England.
Na ọkwa nke mmụọ, mmụọ Anglịkan oge mbụ amachaghị nke Katọlik. Otú ọ dị, ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị ndú nke okpukpe ọhụrụ a gosipụtara ọmịiko ha n'ebe ndị Ndozigharị Protestant ahụ nọ, karịsịa Calvin na n'ihi ya Chọọchị England jiri nwayọọ nwayọọ gbanwee ka ọ daba na ngwakọta dị n'etiti ọdịnala Katọlik na Ndozigharị Protestant. N’ụzọ dị otu a, a hụrụ Anglịkan dịka okpukperechi nke na-anabata ọtụtụ ozizi dị iche iche na mgbakwunye na ihe ndị dị mkpa nke Iso Christianityzọ Kraịst.
Site na ihe ruru 20% nke ndị bi na ya, Katọlik bụ okpukpe nke abụọ ndị Bekee na-eme. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ozizi a na-ahụ maka ịlọ ụwa na England ma kwa ụbọchị enwere ndị ọzọ na mba ahụ. Ihe kpatara ya dị iche iche, ọ bụ ezie na abụọ nwere nnukwu ibu: n'otu aka, ọdịda nke Churchka Englandka England dịka ụfọdụ ndị kwesịrị ntụkwasị obi tụgharịrị gaa Katọlik n'ihi myirịta na okwukwe ma ọ bụ nabata ekweghị na Chineke. N'aka nke ọzọ, ọtụtụ ndị Katọlik kwabatara abịala England bụ ndị na-arụsị ọrụ ike na nkwenkwe ha, si otú a na-eku ume ikuku na mpaghara Katọlik.
O nyekwala aka ịmaliteghachi Katọlik na England na ndị ọnụ ọgụgụ ọha nọ n'ọkwá dị mkpa kwupụtara na ha bụ ndị Katọlik na mba ebe ọ dịbeghị anya ndị a kwesịrị ntụkwasị obi biri na ịkpa oke ma kewapụ onwe ha n'ọkwá ọha na ndị agha. Otu ihe atụ nke ndị Katọlik a ma ama na England bụ Mịnịsta na-ahụ maka ọrụ Iain Duncan Smith, onye isi BBC Mark Thompson ma ọ bụ onye bụbu Mịnịsta Ala Tony Blair.
Okpukpe nke atọ nke ndị bi na England na-eme bụ Islam, yana 11% nke ndị bi na ya na ọ bụ okwukwe toro nke kachasị n'ime iri afọ ole na ole dịka Office for National Statistics si kwuo. Ọ bụ n'isi obodo, London, ebe ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị Alakụba na-etinye uche na-esochi ebe ndị ọzọ dịka Birmingham, Bradford, Manchester ma ọ bụ Leicester.
Okpukpe a mụrụ na 622 AD na nkwusa nke onye amụma Muhammad na Mecca (Saudi Arabia ugbu a). N'okpuru ndu ya na nke ndị na-esote ya, Islam gbasaa ngwa ngwa n'ofe ụwa ma taa ọ bụ otu n'ime okpukpe ndị nwere ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị kwesịrị ntụkwasị obi n'ụwa nwere mmadụ ijeri 1.900. Ọzọkwa, ndị Alakụba bụ ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị bi na mba 50.
Islam bu okpukpere chi di otua nke dabere na Koran, onye ihe banyere ya nye ndi kwere ekwe bu na “odigh chi ozo ma Allah ma Muhammad bu onye amuma ya.”
Okpukpe ọzọ nwere ọnụ ọgụgụ kasị ukwuu nke ndị kwesịrị ntụkwasị obi bụ okpukpe Hindu. Dị ka ọ dị na Islam, ndị Hindu kwabatara na England na-arụ ọrụ n'England wetara omenala ha na okwukwe ha. Ọtụtụ n'ime ha kwagara na United Kingdom mgbe nnwere onwe nke India na 1947 na agha obodo na Sri Lanka nke malitere na 80s.
Obodo ndị Hindu dị oke oke na England, nke mere na na 1995 e wuru ụlọ nsọ Hindu mbụ, n'akụkụ ugwu nke isi obodo England na Neasden, ka ndị okwukwe wee nwee ike ikpe ekpere. A na-eme atụmatụ na n'ụwa, enwere ndị Hindu narị nde asatọ, so na otu n'ime okpukperechi kachasị nwee okwukwe na ụwa.
Okpukpe Hindu adịghị ka onye malitere ya. Ọ bụghị nkà ihe ọmụma ma ọ bụ okpukperechi jikọrọ aka na ya kama otu setịpụrụ nkwenkwe, emume, omenaala, òtù nzuzo na ụkpụrụ omume ndị mebere ọdịnala jikọrọ ọnụ, nke na-enweghị nzukọ etiti ma ọ bụ nkwenkwe akọwapụtara.
Ọ bụ ezie na Hindu pantheon nwere ọtụtụ chi na demigods, ihe ka ọtụtụ n'ime ndị kwesịrị ntụkwasị obi na-etinye aka na ngosipụta atọ nke chi kachasị elu nke a maara dị ka Trimurti, atọ n'ime otu Hindu: Brahma, Visnu na Siva, onye okike, onye nchebe na onye mbibi n'otu n'otu. Chi ọ bụla nwere avata dị iche iche, nke bụ nlọghachi nke chi n’ụwa.
Ọ bụkwa ihe a na-ahụkarị ndị na-eso ụzọ Buddha na England, ọkachasị site na mba ndị Eshia nwere akụkọ ntolite jikọrọ ya na England n'ihi alaeze England guzobere na kọntinent ahụ ruo narị afọ nke XNUMX. N'aka nke ozo, enweela otutu mgbanwe nke okpukpe a site n'okpukpe ndi ozo.
Buddha bụ otu n'ime okpukpe ukwu nke ụwa dịka ọnụọgụgụ ndị na-eso ụzọ ya. Ọ na-ewepụta ọtụtụ ụlọ akwụkwọ, nkuzi na omume dị iche iche nke n'okpuru usoro ala na akụkọ ihe mere eme nkewapụtara na Buddha site na ugwu, ndịda na ọwụwa anyanwụ.
Okpukpe Buddha malitere na narị afọ nke ise BC site na nkuzi nke Siddhartha Gautama, bụ onye guzobere ya, nyere na mgbago ugwu ọwụwa anyanwụ India. Site mgbe ahụ gaa n'ihu, ọ malitere mgbasa ngwa ngwa na Asia.
A chịkọtara nkuzi Buddha na "Eziokwu Anọ ano" ebe ọ bụ nkwenkwe bụ isi nke iwu Karma. Iwu a kọwara na omume mmadụ, ma ọ bụ nke ọma ma ọ bụ nke ọjọọ, nwere mmetụta na ndụ anyị na ihe ndị ọzọ na-abịanụ. N'otu aka ahụ, okpukpe Buddha jụrụ mkpebi n'ihi na ụmụ mmadụ nweere onwe ha ịkpụzi akara aka ha dabere na omume ha, n'agbanyeghị na ha nwere ike keta ụfọdụ nsonaazụ nke ihe ha gabigara na ndụ ndị gara aga.
Okpukpe ndị Juu
Okpukpe ndị Juu nọkwa na England ma bụrụ otu n'ime okpukpe ndị kacha ochie n'ụwa, nke mbụ bụ otu ụdị okwukwe, ebe ọ na-akwado ịdị adị nke naanị Chineke nwere ike niile na ịma ihe niile. Okpukpe Ndị Kraịst na-esite n'okpukpe ndị Juu n'ihi na Agba Ochie bụ akụkụ mbụ nke Akwụkwọ Nsọ Ndị Kraịst na Jizọs, nwa Chineke maka Ndị Kraịst, sitere na ndị Juu.
Ozizi ndị Juu
Ọ bụ Torah, nke bụ, iwu nke Chineke gosipụtara site na iwu o nyere Mozis na Saịnaị, ọdịnaya nke nkuzi ya. Site na iwu ndia, mmadu aghaghi ichi ndu ya ma do onwe ya n'okpuru uche Chineke.
akụkọ ihe mere emeOkpukpe
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Okpukpe na England
ebe bụ percentages
Ahụkarị Moroccan na ato uto